Akekho isitho womuntu akabi nawo umuzwa wokuthi umthwalo, olungena on emehlweni. Phela, bahlale asebenzayo. Amehlo uthole ebuya emsebenzini ekhathele eside ne amaphepha, emkhanyweni ophansi, eside ubuka i-TV, ukufunda incwadi nasezitimeleni.
amehlo Ukhathele nalapho esebenza kukhompyutha!? Lokhu kungokwemvelo, ngoba iso ukuhamba elinganiselwe kakhulu, futhi asingabazi blink kathathu ngaphansi kunokujwayelekile. amehlo ekhululekile ingekho, futhi ngenxa yalokho, kwegazi, futhi bayakhathala ngokushesha.
Wonke umuntu uyazi ukuthi umthwalo anda emehlweni nomthelela ongemuhle engqondweni nasemzimbeni umthamo womuntu, ukunciphisa amaphesenti ayisishiyagalolunye of babe nekhono lokuqonda lutho futhi ugxile. Okufanele ukwenze ezimweni ezinjalo? Indlela enhle - elifudumele-up zamehlo.
Uma amehlo bakhathele, umbono kuba evilaphayo, othi awube nezinkophe. Kumelwe ulale kusofa naphakade ukubeka swabs ukotini ukuthi uke moisten kakhulu ukwenziwa itiye eliluhlaza noma emnyama, lalala ukuthi isimo imizuzu amabili.
Kwalandela inkosikazi engumakhelwane nayo imithetho yokuphepha embalwa:
musa ukuhlala ikhompyutha ekukhanyeni ongaphakeme;
njalo ngemva kwemizuzu engu amane, okwenza abanye bayalibala ukwenza emsebenzini;
qiniseka ukwenza gaphambi zamehlo izikhathi eziningana ngosuku.
Kanjani ukwenza izivivinyo:
efudumele i-emehlweni ukwenza ngaphandle izibuko;
ukulilandela ngokukhululekile futhi usesimweni esikhululekile;
musa nzima osemahlombe akho futhi aphansi;
ukubuyisela ukuphefumula, kufanele kube bushelelezi futhi ijulile.
Ukuzivocavoca eyodwa: "Ngibona unomgomo"
Umgomo imisipha iso kanye lens.
Technique: emva isigamu sehora umsebenzi ukuqondisa amehlo akhe kude, una- bakhe kunoma iyiphi isihloko ngaphandle kwefasitela phezu sill iwindi noma ehhovisi. Uma amehlo akho ayethe njó into eyodwa, ngomusa ukuhambisa amehlo akho into sise ibangana, kodwa hhayi ku-PC yakho. Phinda lokhu ezintathu - kane.
Ukuzivocavoca ababili: "Okufudumele zamehlo - formula 20-20-20"
Umgomo ukuqedela ukuphumula iso.
Technique: amasekhondi amabili ukuze blink izikhathi ezingamashumi amabili, futhi ngakho njalo ngemva kwemizuzu engu amabili.
Ukuzivocavoca ezintathu: "Magic entendeni"
Inhloso ukususa ingcindezi kusukela emehlweni futhi isikhungo ezibukwayo ebuchosheni. Lokhu kusiza hhayi kuphela sokusebenzisa i-computer, kodwa futhi nesokuphumula nokuqabuleka usemihlanganweni eside, uhlangabezana ezinzima ukukhathala, ukudideka, ukucindezeleka kanye nobuhlungu.
Technique: ukwenza ukuzivocavoca njalo ngehora imizuzu emihlanu. Hard ukukuthinta entendeni komunye nomunye, ukuze zifudumala, wayesezibeka izindololwane zakho phezu kwetafula, vala amehlo akho bayigubungele izandla zabo. Kufanele walala crosswise, futhi into yokuqala kwesokunxele kunokuba ilungelo. Izintende akufanele ucindezele phansi amehlo.
Ukuzivocavoca ezine: "Dweba izinombolo"
Inhloso ukuthuthukisa microcirculation semithambo.
Technique: uma inqubo cishe ikhanda lakho, dweba emehlweni izinombolo kusuka zero kuya kwemithathu, kanti kolunye uhlangothi, bese kusuka ezine kuya kweziyisithupha, bese eziyisikhombisa kuya kweziyisishiyagalombili.
Okufudumele amehlo phytosolutions
Ngemva efudumele i-ekhaya ungenza iso phytosolutions iso. Ngokwesibonelo, fresh amahlamvu Fern noma amahlamvu oqoshiwe we burdock evamile. Ungqimba kwaphumela lisetshenzisiwe amehlo futhi abopha ekhanda lakhe.
Uma une amehlo zamanzi, thatha amaqabunga fennel green futhi isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, engeza amantshu amaqanda. Ungqimba kwaphumela is in kuyithuba ziyasebenza amehlo. Ungasebenzisa futhi i-umpe lezi zitshalo.
Uma une conjunctivitis noma ukuqala yimuphi omunye ukuvuvukala, kungcono ukusiza elihlanza ngokuligeza decoction of fennel futhi amaconsi ambalwa eyebright imbiza.
Vikela amehlo akho azobatlhogomela, ngoba ukukusiza ubone umhlaba!
Imbobo lacrimal. Dacryocystitis
Incwadi uma ikhuluma ngebitume - Iyini? Izakhiwo kanye isicelo ibitume
Kungani ama-Olympics akazange avule iringi: ukuhluleka lobuchwepheshe noma ulimaze?